Xubno katirsan Al-Shabaab oo liiska argagaxisadda lagu daray | KEYDMEDIA ONLINE
Xubno katirsan Al-Shabaab oo liiska argagaxisadda lagu daray
Mareykanka ayaa horey cunaqabateyn u saarey hogaamiyeyaal sare oo katirsan Kooxda, wuxuuna qaarkood madaxooda dul dhigay lacag maalyiin dollar ah.
WASHINGTON - Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay liiska argagaxisadda ku dartay labo xubnood oo kamid ah Kooxda Al-Shabaab.
Labadan xubnood ayaa kala ah Cali Maaxmed Raage iyo C/qaadir Maxamed C/qaadir, kuwaasoo Washington ay sheegtay in la xayiray hantooda ama danihii ka yaallay Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaantay labada xubnood kuwa khatar badan, oo ku dhex leh Al-Shabaab awood badan, oo weeraro ku fulin karaan, waxaana tallaabada liiska argagaxisadda loogu daray looga hortagayaa inay dhaq-dhaqaaq sameeyaan.
Cali Maxamed Raage waa afhayeenka Al-Shabaab, laakiin qoraalka kasoo baxay Wasaaradda laguma sheegin xilka uu ka hayo Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida, taasoo Mareykanka uu kula dagaalamayo gudaha Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ugu hanjabtay shirkad ama shaqsi kasta oo la macaamila labadan shaqsi ee liiska argagaxisadda ay ku dartay.
Mareykanka ayaa horey cunaqabateyn u saarey hogaamiyeyaal sare oo katirsan Kooxda, wuxuuna qaarkood madaxooda dul dhigay lacag maalyiin dollar ah, oo loo balan-qaadey cidii soo sheegto xog horseedaysa in la dilo ama lasoo qabto.